Review Tablet Kids 2022 - Hagaha Dhamaystiran
Reviews Tablet Kids
Blackview Tab 6 Carruur ah
Hadiyado loogu talagalay socod baradka
Hadyad loogu talagalay ilmaha 1 sano jira
iPads ee carruurta
Dib u eegista kiniinka carruurta - Kiniiniga ugu Fiican Carruurta 2022
Waxaad raadinaysaa mid la isku halayn karo Baaritaanka kiniinka carruurta oo leh hab hufan? Waxaan leenahay kaniiniyada carruurta ugu fiican 2022 la tijaabiyey.
Moodooyinka ugu fiican 2022
Tifaftirayaasha tijaabada kiniinka carruurta
La cusbooneysiiyay Abriil 29, 2022
Waxaad raadinaysaa mid la isku halayn karo Baaritaanka kiniinka carruurta oo leh hab hufan? Waxaan leenahay kaniiniyada carruurta ugu fiican 2022 la tijaabiyey. Iibsashada kiniinka carruurta waa maalgashi weyn. Waxaan haynaa moodooyinka hadda jira ee waxqabadka qiimaha iyo Saaxiibtinimada carruurta waa la tijaabiyay. Hadda wax akhri oo isku hubso lacagta ku baxday sifooyinka ugu fiican adiga iyo ilmahaaga. Riix hadda si aad u akhrido faallooyinkayada kiniinnada kala duwan oo aad u ogaato midka ku habboon ilmahaaga.
Tijaabi qiimaynta ku guulaystaha iyo dulmarka
Marka la soo iibsado cusub, kaniiniyada carruurtu waa inay lahaadaan sifooyin badan intii suurtagal ah laakiin waa in la xakameeyo waalidiinta
Liiska hubinta ee kiniinnada carruurta
Natiijada baaritaanka kiniinka carruurta si faahfaahsan
1. Blackview Tab 6 Kiniinka carruurta ee carruurta
doorin: Saddex ilaa siddeed sano
childlock: Aagga iKids ee xakamaynta waalidka, qaboojiyaha app, ilaalinta erayga sirta ah, maamulka wakhtiga, maamulka codsiga, maamulka isticmaalka, maamulka shabakada
Koontooyin badan oo caruur ah: Haa
warranty: 2 sano (Sida uu qabo soo saaraha: Haddii ay dhacdo cillad, waxaa lagu soo celin karaa soo saaraha waxaana la keenayaa kiniin beddel ah)
caafimaadka: Farsamada iftiinka buluuga ah ee hooseeya, Habka mugdiga ah, Kiisku maaha mid sun ah oo aan ur lahayn
Awoodda keydinta: 32GB (256GB la ballaarin karo)
xallinta kamarada: 2MP + 5MP
Cabirka wax soo saarka X x 20.8 12.4 0.9 cm
baytariyada 1 baytariyada lithium-ion ayaa loo baahan yahay (oo lagu daray).
Cabbirka muuqaalka 8 inch, 1280*800 qeexitaan sare IPS taabashada shaashadda
Xuduudaha Processor -ka: 8
xusuusta gelitaanka aan kala sooca lahayn: 3GB RAM
Nooca isku xidhka: 5G WIFI, 4G LE, Bluetooth
nidaamka qalliinka Android 11 & Doke OS_P 2.0
Nolosha batteriga: 9.9 watt saacadood
Miisaanka sheyga : 365 garaam
Dhibcahayagu waa 9.6
Soo jeedinta ugu wanaagsan
Akhri dib u eegista
Xiriirada: Deked USBC, booska MicroSD, jaakadda dhegaha ee 3,5mm
SIM: Dual SIM (2*Nano SIM ama 1*Nano SIM + 1*microSD)
jabnaantaHabka madadaalada laba-shaashadda, dual 4G LTE: waxay isticmaali kartaa laba kaadh oo taleefoon isku mar, aqoonsiga wajiga furka, kiis maqaar ah
2. 🥈 Dabka HD 10 Kids Tablet
Nidaamka hawlgalka: Fire OS
Cabbirka muuqaalka: 10,1 gudaha
warranty: 2 sano
xallinta shaashadda: 1080 pixels
WiFi ku haboon
32 GB oo xusuusta ah
Midabada: Kiis ku jira buluug, aquamarine ama lavender
Kamarada hore iyo gadaal
childlock Shaandhaynta da'da, yoolalka waxbarashada iyo wakhtiga xaddidan
hagaajinta da'da: ka dib marka la galo taariikhda dhalashada
Google Play Store waa suurtagal
habka keydinta awoodda
Octa processor processor
dallacaadda dekedda: USB-C-(2.0)
Nolosha batteriga: Ilaa 12 saacadood
Nidaamka hawlgalka: Android 10
Cabbirka muuqaalka: 8 gudaha
xallinta shaashadda: 1920 x 1200 Pixel
8 inch HD muuqaal ah
Kaydinta: 32GB (la fidin karo ilaa 128GB)
Midabada: Laba midab; buluug iyo casaan
Qalabka lagu ciyaaroGoogle Play Store waa suurtagal
ammaanka: AEEZO Bilaash App-ka Xakamaynta Waalidka: La xidhiidh carruurta oo hubi dhaqdhaqaaqyadii dhawaa + inta jeer iyo muddada isticmaalka
Nolosha batteriga: 9.25 saacadood
dhinacyada: 21 x 12.5 x 1 cm; 350 garaam
camera: laba kamaradood (2MP+5MP).
warranty: Hal sano soo noqosho iyo adeeg sarrifka.
4. Dabka 8 HD Tablet Kids Edition
Nidaamka hawlgalka: Dabka OS
2 damaanad sanadeedQalabka waxaa lagu beddeli doonaa lacag la'aan
0% maalgelinta: €45,00 x 3 qaybood oo bille ah
8 inch HD muuqaal ah sawiro fiiqan iyo muuqaalo
Amazon Kids +: maktabadda warbaahinta xayeysiiska ah
WiFi ku haboon: internet aan xad lahayn
32 GB xusuusta leh booska microSD: ilaa 1 TB la ballaarin karo
Midabada: Waxaa lagu heli karaa saddex midab
Dejinta wakhtiga isticmaalka carruurta oo suurtogal ah
5. Kiniinka caruurta oo ku faraxsan
childlock: nidaamka ilaalinta erayga sirta ah, dejinta wakhtiga shaashadda, hababka amniga iyo maaraynta nuxurka baadhista.
caafimaadka: Farsamada iftiinka buluugga ah ee hooseeya
Awoodda keydinta: 32 GB (la fidin karo ilaa ugu badnaan 128 GB)
xusuusta gelitaanka aan kala sooca lahayn: 2GB RAM
Cabirka wax soo saarka X x 21 12.4 1 cm
midabada: buluug, casaan
Display: 8 inji, 1920x1200 pixels
Processor: 1,6 GHz quad-core processor
Xuduudaha Processor -ka: 4
Nooca isku xidhka: Wi-Fi
nidaamka qalliinka Android 9.0 - 10 (waxyaabuhu way kala duwan yihiin)
accumulator: 5000mAh lithium polymer baytari
Nolosha batteriga: 4.9 watt saacadood
Miisaanka sheyga : 863 g
Xiriirada: USB Type-C, booska MicroSD, jaakadda dhegaha
dukaanka ciyaarta: Macquul
jabnaantaApp-ka "Kooxda Qoyska" oo u oggolaanaysa in carruurta lala sheekeysto iyo la samaynta wicitaanno muuqaal ah
Mirena: 5V 2A dabaylaha ayaa u baahan in si gaar ah loo iibsado
6. WAYN.GOO KT1006 Kids Tablet
Cabirka wax soo saarka X x 24.4 20.2 3.4 cm
Display: 8 inji, 1280x800 pixels
Nooca isku xidhka: Bluetooth, WiFi
nidaamka qalliinka Android 10
accumulator: 6000mAh lithium polymer baytari
Nolosha batteriga: 9.25 watt saacadood
Miisaanka sheyga : 540 garaam
7. Kiniinka Kids Gear-ka Quruxda yar 7
Summad: Gear dhagax ah
childlockWaalidiintu waxay la socon karaan, dejin karaan wakhtiga ciyaarta, muddada ciyaarta iyo gelitaanka abka ee akoonnada waalidka
caafimaadka: Shaandheeyaha iftiinka buluuga ah, ciyaaraha dukaanka app gaar ah waa bilaash
Awoodda keydinta: 16 GB (qiyaastii 12 GB ayaa wali la heli karaa ka dib markii la rakibo)
Cabirka wax soo saarka 25x18x2cm; 780 garaam (Barafaysan), 7.7 x 17.5 x 24.1 cm (Baabuur),
midabada: Buluug khafiif ah (Barafaysan), Jaalle Khardal ah (Toystory), Calaamadaha Casaanka ah (Baabuurta), Turquoise Blue (Buluug Mickey Mouse + Sameecado-dhegaha)
Cabbirka muuqaalka 7 Zoll
nidaamka qalliinka Android 8.1 Oreo / ama Android 8.1 Go (Mickey Mouse iyo nooca baabuurta)
Miisaanka sheyga : 780 garaam (la barafeeyey), 485 garaam (Mickey Mouse),
Xiriirada: Deked MicroUSB, booska MicroSD
dukaanka ciyaarta: Suurtagal maaha (Youtube iyo Youtube Kids waxa kaliya loo isticmaali karaa iyada oo loo marayo Safe-Brower iyo liiska caddaymaha)
jabnaantaIn ka badan 500 oo ciyaarood iyo abka leh 12-bilood gelitaanka bilaashka ah ee 'GameStore Junior App Store'. (Intaas ka dib 39,99 euro hal sano.)
Laga bilaabo 89,90 - 124,99 EUR
Cabirka wax soo saarka 19 x 12 x 1 cm; 350 garaam
Xuduudaha Processor -ka 4
Cabbirka RAM 2 GB
Kaydinta Art DDR3 SDRAM
Nooca isku xirnaanta Wi-Fi
xallinta kamaradaha webka 2MP
nidaamka qalliinka Android
baytariyada waxaa ku jiray Haa
Nolosha batteriga: 11.1 watt saacadood
Miisaanka sheyga : 350 g
laga bilaabo 98,99 Euro
Cabbirka muuqaalka: 7 gudaha
7 inch HD muuqaal ah
Midabada: Wuxuu ku yimaadaa laba midab: buluug iyo casaan
AEEZO Bilaash App-ka Xakamaynta Waalidka: La xidhiidh carruurta oo hubi dhaqdhaqaaqyadii dhawaa + inta jeer iyo muddada isticmaalka
laga bilaabo 85,83 Euro
Habka tijaabada kiniinka carruurta
Waxaan isticmaalnay oo ku tijaabinay dhammaan 23 kaniini oo kala duwan oo carruurta ah baaritaanka muddo 5 maalmood ah. Laga soo bilaabo wadarta 20 kiniin ee suurtogalka ah ee carruurta, waxaan ugu dambeyntii u isticmaalnay 10 baaritaanka waqti dheer waxaana ku dhejinay heerkooda. Ammaanka aaladda, nidaamka qalliinka ee loo isticmaalo iyo sidoo kale maaraynta carruurta ayaa ahaa shuruudaha ugu muhiimsan ee qiimayntayada.
Interface-ka isticmaaluhu waa inuu ahaadaa mid ku habboon baahiyaha carruurta. Kuwaas waxaa ka mid ah dareenka taabashada, navigation leh xirfadaha dhaqdhaqaaqa hooseeya iyo ka kooban liiska iyo waxa ku jira. Kuwani waxay ahayd inay si fudud u helaan carruurta.
Tilmaamaha farsamada. Kuwaas waxaa ka mid ahaa xallinta bandhigga, dhalaalka iyo milicsiga. Sidoo kale mugga xusuusta, xallinta kamarada iyo xawaaraha processor-ka.
Dejinta amniga iyo xakamaynta mas'uuliyiinta sharciga ah. Suurtagalnimada in la xaddido wakhtiga isticmaalka waxay ahayd inay diyaar ahaato. Waalidiintu waxay u baahnaayeen inay nidaamiyaan waxa ilmuhu cuni karo oo ay awoodaan inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ilmaha. App-ka waalidku waxa uu ahaa mid dheeraad ah.
xasiloonida. Nooca iyo inta uu le'eg yahay daboolka ayaa u adkaysan lahaa dhicis ugu yaraan 3 mitir ah. Intaa waxaa dheer, ma jiraan ur aan fiicnayn oo ka soo baxa walxaha.
Qiimaha. Waxaan gabi ahaanba ka reebnay soosaarayaasha leh kharashaadka qarsoon ama dabinnada isdiiwaangelinta ee dulmarkan.
Natiijada oo faahfaahsan: Amazon Fire 8HD tablet
Dabka 8 HD Tablet Kids Edition wuxuu leeyahay qaab caag ah oo tayo sare leh. Saanqaadayaasha iyo kuwa aan weli gaarin dugsiga ee jecel inay tijaabiyaan xadkooda oo halis u ah inay waxyeeleeyaan kiniinka ayaa tan si wanaagsan loogu adeegay. Waxaan rumeysannahay in kaniinigani uu noqon doono saaxiib adag sannado badan, xitaa carruurta yaryar, maadaama xogta isticmaaleyaasha ee aan baarnay ay muujinayso in qaab-dhismeedka iyo shaashadda ay si fiican u hayaan marka ay carruurtu ku xad-gudbaan.
Kiniinku waa ikhtiyaar aad u fiican carruurta sababtoo ah waa mid fudud, waara, oo leh nolol batari dheer. Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa wax ka badan ciyaaraha - waxaad u isticmaali kartaa inaad daawato filimada ama bandhigyada TV-ga, akhrinta buugaagta, ciyaaro abka waxbarashada, ama xitaa samee shaqada guriga! Iyo kontoroolka waalidnimada, waxaad xaddidi kartaa waxay ku arkaan internetka si aysan u soo gaadhin wax aan habboonayn.
✔️ Laba sano oo dammaanad ah oo aan walwal lahayn: Qalabka waa la beddeli doonaa haddii uu jabo muddadan
✔️ Xakamaynta Waalidka: heerka amniga si buuxda loo hagaajin karo iyadoo lagu salaynayo da'da iyo dookhyada isticmaalaha
✔️ Maalgelintu waxa ay suurtogal tahay 0 boqolkiiba saddex qaybood oo bishiiba ah ilaa 45 euro
✔️ Bandhig siddeed inch ah oo leh xallin Full HD
✔️ Maktabad warbaahineed iska leh adigoon xayeysiin la socon AmazonKids+ rukunka
❌ Ma jiro Google Play Store oo suurtogal ah sababtoo ah qalabku wuxuu isticmaalaa Fire OS (nidaamka hawlgalka Amazon) halkii uu isticmaali lahaa Android. (Hagaha sida loo rakibo Netflix si kastaba)
❌ Muuqalku wuxuu u muuqdaa mid madow
❌ LTE suurtagal maaha markaad socoto
kaniiniyada carruurta enthalten cusub iibsaday Ku dhawaad ​​dhammaan sifooyinka qalabka loogu talagalay dadka waaweyn ayaa sidoo kale ku leh suuqa. Wax-soo-saarayaashu waxay dejiyeen hadafka ah inay kaniiniyada la koraan si carruurtu ay u isticmaalaan si madaxbannaan. Isla mar ahaantaana, waxaa jira sidoo kale shaqooyin waalidiinta Allow Yaree wakhtiga shaashadda carruurtooda iyo isticmaalka internetka iyo la socodka. Sidaas daraaddeed in kiniiniga da'da sare iyo ku adkeyso dugsiga way badan yihiin Moodooyinka kiniiniga ah ee ku habboon ardayda. Dhanka kale, kiniiniyada carruurta casriga ah waxay ujeedadoodu tahay inay tan sameeyaan intii suurtogal ah ciyaal-saaxiibtinimo in la siiyo carruurta fursad ay si madax-banaan uga faa'iidaystaan ​​laga bilaabo da'da yar iyo si waafaqsan isticmaalayaasha yaryar si ay ula koraan. Sababtoo ah waxay la qabsan karaan da 'kasta, kaniiniyada waxay aadi karaan waddo dheer nolosha qofka gaadhaan Taasina waxay leedahay mid sidoo kale dhinaca deegaanka, oo ay tahay inaad tixgeliso markaad iibsanayso. Waalidiin badan ayaa sidoo kale la yaabban in a Kiniinka carruurta ayaa macno samaynaya waa iyo haba yaraatee waxbarasho qiimo leh noqon kara. Waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa qodobadan hoose ee imtixaanka.
Kiniinnada casriga ahi waxay leeyihiin astaamo badan oo u oggolaanaya waalidiinta inay xakameeyaan carruurta marka ay isticmaalayaan isla markaana siiya carruurta fursad ay isugu geeyaan ciyaarta iyo madadaalada iyo waxbarashada. Tilmaamaha kiniiniga carruurta ee 2021 waa inay ku jiraan waa:
Saacad si loo xaddido wakhtiga isticmaalka carruurta (Wax badan oo ku saabsan mawduuca: Intee in le'eg ayaa wakhtiga shaashadda u fiican carruurta? / Waqtiga shaashadda carruurta ee quful)
Astaamaha sida kamarada, kamarada hore iyo kamarada danbe
Afyare Micro-SD si loo balaadhiyo kaydinta
Dabool difaac xasiloon oo ka hortagaya waxyeelada saameynta (Wax badan oo ku saabsan mowduuca: gardarada caruurnimada)
Xulashada dallacaadda USB-C
Soo saarista taleefoonka dhegaha, gelinta makarafoonka iyo korka miiska
Natiijooyinka baaritaanka kiniinka carruurta - kiniinigee ugu fiican carruurta?
Kaniiniga carruurta ahaan, waxaanu si wadajir ah ugu talinaynaa tan Dabka 8 HD Tablet Kids Edition. Sababta ugu weyn: Waxaa ka mid ah via Amazon one damaanad laba sano ah. Markaa qalabku wuu jabaa, isla markiiba waad isticmaali kartaa sarrifka - iyo laba sano. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban tahay dhammaan hawlaha kiniiniga si buuxda u dhammaystiran ee loogu talagalay dadka waaweyn oo sidaas darteed la kori kara iyaga. The interface user iyo nuxurka waa doorsoomayaal, la kontarooli karo oo ku haboon Ku habboon baahiyaha carruurta, ah Tablet karaa ugu yaraan ku da'da dugsiga la isticmaali karo. Kaalinta labaad waxa aadi jirtay kiniinka carruurta ee Vankyo S8. Waxay leedahay 60 GB ugu weyn Meel lagu keydiyo, Marka lagu daro qaabka waalidnimada, waxa kale oo uu leeyahay qaab fudud oo indhaha ah. Waxa kale oo jira kamarad hore iyo danbe oo leh muuqaal tayo sare leh waxaana diyaar u ah dadka jecel Playstore Google. Kani sidoo kale waa kiniin si buuxda u dhisan. Habaynta da'da, Vankyo S8 waxa loo isticmaali karaa ilaa da'da dugsiga.
Kiniinadu waa hab fiican oo aad carruurtaada ku maaweelinayso.
Imtixaanka Kiniinka Kids waa meesha ugu fiican ee lagu ogaanayo kaniiniga ku habboon adiga iyo qoyskaaga. Waxaan haynaa dib u eegis ku saabsan dhammaan kaniiniyada ugu sarreeya si aad go'aan xog ogaal ah uga qaadan karto kiniinka adiga kuugu fiican. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto waxa uu leeyahay kaniini kasta, inta uu ku kacayo, iyo kooxda da'da ee ku haboon ka hor intaadan wax iibsan.
Fikradda hadiyadda ugu fiican! Sii carruurtaada wax ay jeclaan doonaan taasina waxay sidoo kale ka caawin doontaa inay wax badan ka bartaan tignoolajiyada adduunkan dhijitaalka ah ee aan maanta ku nool nahay. Intaa waxaa dheer, inta badan kiniiniyada waxaa ka buuxa barnaamijyo waxbarasho oo ka caawin kara carruurta inay bartaan xirfado cusub iyadoo lagu maaweeliyo.
Carruurtu had iyo jeer way socdaan waxayna u baahan yihiin wax lagu maaweeliyo.
Kiniinadu waa hab fiican oo ay caruurtu ku bartaan tignoolajiyada jawi badbaado leh oo aan ka mashquulin shaqadooda dugsiga sida taleefannada casriga ah ay awoodaan. Oo haddii ilmahaagu jecel yahay ku ciyaarista ciyaaraha kiniinka, markaa taasi waa qumman tahay sababtoo ah waxaa jira ciyaaro badan oo waxbarasho sidoo kale! Markaa mar dambe ha sugin - u soo qaado ilmahaaga kaniini maanta!
Twitter Instagram Dhexdhexaad